Iindaba - i-2019 eCairo, Egypt (umatshini wokwenza iphepha)
Ngelanga elishushu kunye nomxube omangalisayo waseArabia.
Silandele iqela lomboniso wephepha iBossing kwiCairo entle.
Ukungena eYiputa ngumthendeleko wamehlo, uhambo lwemibongo.
Kukho iipiramidi eziyimfihlakalo, iipharao zakudala kunye neendawo ezintle ezinomlambo iNayile.
Nangona kunjalo, into esenza sonwabe ngakumbi bubuchwephesha bomboniso wokwenza iphepha.
Ngexesha lomboniso, uthotho lwemisebenzi enemixholo eyahlukileyo ayinakuphucula kuphela umgangatho wobungcali babakhenkethi kunye nokunyusa inani labatyeleli abanobuchule, kodwa ikwanyuse ukutshintshiselana kunye nentsebenziswano phakathi kwamashishini ephepha kunye nababonisi kumazwe ahlukeneyo ngexesha lomboniso.
Kwangelo xesha, ukulungiselela amashishini okwenza iphepha kunye nezixhobo zawo ezihamba phezulu, izinto ezingavunyelwanga, iikhemikhali, abathengisi bolawulo oluzenzekelayo ukwakha iqonga lonxibelelwano.
Ngexesha lomboniso, ubuchwephesha bokwenza iphepha kunye neesemina zabanjwa, kunye nesidlo sangokuhlwa sotshintshiselwano, kusenziwa umsitho omkhulu kumzi-mveliso wokwenza iphepha eMiddle East.